Ndinotanga sei kutsvaga muongorori weOO consultant?
Kana iwe uchangobva kutanga webhusaiti yako uye uchigere kuva nevatengi uye kutengesa, chikonzero chinogona kunge chiri chimwe chete - iwe nzvimbo haisi kuonekwa kutsvaga vakwegura uye zvichienderana nevashandisi vepasi paSERP. Zviri nani kutsvaga injini kuonekwa kunogona kukosha pakuwedzera magwara kunzvimbo yako, izvo zvingaita kuti kuwedzerwa mazita ekuzivikanwa uye mari yakakwirira. Kana iwe usina nguva uye ruzivo rwekuvandudza nzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo, ipapo yakanakisisa yako ndeyekutaura kune mumwe muongorori weZOO wekambani kana kambani.
Nzira yekuwana, kusarudza nekubhadhara mutungamiri webazi reSeO yakagara iri basa rakaoma kune vashandisi vewebhu uye vatengesi vemakambani. Kunze kwekuti iwe unogona kuwana mamwe mazano anokosha kubva kunhare yako, yako nzira yekutsvaga chakanaka SEO mupiro inotanga kubva pakutanga.
Nzira dzekuwana nyanzvi yevashandi veSeO
Muchikamu chino, uchawana zvimwe zvinokosha kuti uwane mushandi webazi we SEO ane ruzivo anokwanisa kukubatsira kuwedzera mari yako uye kukurisa kudzokera kwekutsvaga (ROI).
Tsvaga mumambure kuti uwane mamwe mazano
Google inogona kushanda sechitenderera chemukati chekutenda munguva yekutarira. Pane mamwe mazita emakambani eTO SEO anowanika paGoogle. Uyezve, unogona kuwana mamwe mazano uye zvinyorwa zvevatsvaga ve SEO kuti dzimwe nyanzvi dzeOOO uye vakagutsikana nevatengi muwetaneti vakashanda pamwe. Iwe unogona kuwana tsanangudzo pazvikwata zve SEO kana vashandi pane dzimwe nzvimbo dzekuongorora dzinokosha dzakadai seWOT kana Trustpilot. Zvinokurudzirwa kutsvaga muongorori weOO consultant pamasangano ehupfumi, zvikurukuru LinkedIn, uye Twitter. Iko iwe ungasawana kwete nyanzvi mune optimization sphere asiwo vanhu vakangobvumirana nematare aya.
Ongorora maongororwo ezvevadzidzisi veSeO vepanzvimbo dzechitatu
Kune zvakawanda zvakakanganisika zvekuongororwa mapurisa apo vatengi vanogona kusiya maitiro avo pamusoro pekugadzira makambani uye nyanzvi. Izvi zvinowanzoitika zvechokwadi, uye hunoita sevanhu vanovasiya havaoneki vachifarira SEO company profit. Tsvaga mhando dzevatengi kuti tsvakurudzo yekutsvakurudza yakawanda yakashanda pamwe chete, iyo yebasa rakaitwa, nemigumisiro yakawanikwa.
Shanyira misangano yeZOO nyanzvi uye kutsvakurudza injini yekuisa maforamu
Nzvimbo yakanakisisa yaunogona ivai nekutarisana chiso nechiso nehupenyu hwenyu mune ramangwana SEO muongorori ndeyeMunited States uye maforamu. Pano unogona kushamwaridzana nemunhu uye kumubvunza mibvunzo pamusoro pekushandura webhusaiti uye chengorora kana mupi wezano uyu angakubatsira kuti uite zvinangwa zvebhizimisi rako kana kuti kwete.
Ongorora zvinyorwa zveblogiti kuti uwane muwani akakodzera SEO
Kuti uwane muongorori weOO consultant anotaura mutauro unonzwisiswa kwauri, unogona kuverenga zvaanonyora mubhuku rake. Ichakubatsira kuti uwane mutsara wakanaka wakabva pamhando yebasa raunoda kuitwa. Verenga chete avo mabhuku emashoko anotaura nezvehutano hwemashumiro eunoda kuitwa panzvimbo yako Source .